LAHATENIN’I RAKOTOMANANA HERY AMIN’IZAO ANKATOKY NY FAMPIELEZANKEVITRA IZAO |
Ry vahoaka Malagasy mpifidy, Ianareo kandida roa tonta,
Misokatra rahampitso faha-4n’ny volana desambra 2018 ny fampielezan-kevitra manodidina ny fifidianana Filoham-pirenena fihodinana faharoa, ary hifarana ny faha 17n’ity volana ity ihany amin’ny 12 ora alina.
Eo anatrehan’izany dia miangavy ireo kandidà izahay, mba hanaja toy ny anakandriamaso ireo lalàna manan-kery mifehy ny fifidianana.
Hanaja ihany koa ny soatoavina maha-Malagasy antsika, dia eo amin’ny fanomezam-bahana ny fifanajana, fa ihany koa ny fanajana ny fahamarinana.
Fa indrindra, hampanjaka ny fitoniana, eo amin’ny fiezahana handresy lahatra ireo mpomba, tsy hivarina any amin’ny teny tsy voahevitra na hihoa-pefy.
Isika vahoaka mpifidy kosa, dia hitohy hampiseho fahamatorana hatrany, ka tsy hivarotra ny safidintsika amin’ny vary iray venty, enta-madinika, kasikety na T-shirt. Fa handinika tsara ireo programanasa izay atolotr’ireo kandida.
Tsy ny kiantranoantrano na ny tombontsoa manokana no ifotorantsika, fa ny hevi-dehibe sy ny tombontsoa ambonin’ny firenena, ka izay heverintsika fa tena mahavita no safidiantsika, fa tsy ny mamirapiratra ivelany.
Ndeha àry isika rehetra hitohy hatrany hampiseho eo imason’izao tontolo izao fa vahoaka matotra, miantoka ny hoavin’ny firenena, eo amin’ny fampanjakana ny demokrasia ny Malagasy.
Dia hotahian’Andriamanitra avokoa isika mianakavy.
← HANDBALL CCCOI : UN DOUBLE POUR LA REUNION
GROUPE DE REFLEXION ET D’ÉCHANGES (GRE) : HARO SUR LES PROVOCATIONS AUX CONFLITS →